Ingxelo entsha eneenkcukacha ityhila iverizon, at & t, kunye t-mobile & apos;
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ingxelo entsha eneenkcukacha ityhila iVerizon, i-AT & T, kunye neT-Mobile kunye neeapos;
Ingxelo entsha eneenkcukacha ityhila iVerizon, i-AT & T, kunye neT-Mobile kunye neeapos;
Ukuba u & apos uhlobo oluvaliweyo lomlindi womzi mveliso ongenazingcingo othanda ukugcina iso kwiingxelo zentengiso epheleleyo kunye neemvavanyo zesantya ezipapashwa rhoqo yiRootMetrics kunye Efanelekileyo , sele uyazi inkampani yangaphambili ye-analytics esanda kukhutshwa iziphumo zokuqala zophando lwayo lonke lweli lizwe .
Olu phando, lubizwa ngokufanelekileyo 'yi-US State ye-Mobile Union 2H 2020', yiyo ikhutshwe ngokupheleleyo namhlanje , Ukubonelela ngenkangeleko ebonakalayo eneempawu kumandla obuthathaka kunye nobuthathaka besizwe kunye ne-apos; ezinkulu ezintathu zokuphatha.
Emva kokuhambisa onke amabhaso asixhenxe aphezulu kunyaka ophelileyo & apos; Julayi-Disemba 2020 kwixesha lomqhubi wenethiwekhi yeselfowuni eyenzeka njalo ukuba ibe nelona ziko likhulu labathengi phaya, i-RootMetrics ikakhulu ibeka ukukhanya kwi-AT & T kunye ne-T-Mobile ngeli xesha , begxininisa igalelo labo elibalulekileyo kumzi mveliso kunye nenkqubela phambili ethe gqolo yakutshanje ngokubhekisele kwisantya kunye nokugubungela.
I-AT & T ihambisa 'iziphumo ezikhuthazayo ze5G kunye nokwandiswa kweenyawo ze5G'
Ngelixa uninzi lweengcali lubonakala ngathi lungahoyi igama likaMell & apos (kunye nesiteketiso) xa uqikelela yeendlela zentengiso ze5G zexesha elizayo kunye nokuvavanya impumelelo yokuqala kule ndima, umphathi ophetheyo ubonakala ngathi uphucule ngokuthe cwaka isantya kunye nokufumaneka kokuqhubeka kwayo Inkonzo ye-5G kwiindawo ezininzi.
Xa kuthelekiswa nesiqingatha sokuqala se-2020, nini I-AT & T. & apos; s Umqondiso we5G wawufumaneka kuphela kwiimarike ezinkulu ze-78 'kwi-US iphela, abavavanyi beRootMetrics babenakho ukunxibelelana nenethiwekhi ye-gen elandelayo kwi-106 yeedolophu ezinkulu ze-125 abazindwendweleyo kunyaka kunye ne-apos; kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo. Kwezi, iimarike ezili-18 ezifanelekileyo zibone amanani akhuphelweyo ama-5G aphakathi angama-60 Mbps okanye ngaphezulu, iKansas City, eMissouri iseta irekhodi elinomtsalane le-94.8 Mbps.
Gcina ukhumbula ukuba i-AT & T ibonelela ngesantya se5G usebenzisa zombini iteknoloji ye-mmWave ehamba phambili kunye ne-low-band spectrum ephantsi, eyokugqibela ichaza indlela umphathi ophethe ngayo ukugqitha ukufumaneka kweepesenti ezingama-50 kwi-5G iyonke kwizixeko ezingama-33, xa kuthelekiswa nokubetha okungu-57 ye T-Iselfowuni kodwa kuphela li-10 ukuya kuthi ga kwiVerizon echaphazelekayo.
Mhlawumbi i-AT & T & apos; eyona mpumelelo inkulu ye-H2 2020, nangona kunjalo, zizixeko ezili-14 apho isantya sokukhuphela ngokubanzi (kubalwa kuthathwa zombini i-5G kunye ne-4G LTE kunxibelelwano kwiakhawunti) kugqithisile kwi-50 Mbps. Leyo & apos iphantsi kancinci kunezixeko ezingama-20 apho iVerizon ikhuphe khona into efanayo, kodwa uyakholelwa okanye awuyikholelwa, iT-Mobile ayinakukwazi ukufikelela kwi-50 Mbps avareji kwimakethi enye kuvavanywa yi-RootMetrics ngeenjongo zoku Ingxelo enzulu.
I-T-Mobile ihlala iyintshatsheli yokufumaneka kwe5G engafakwanga
Amanzi manzi, ingca iluhlaza, kwaye iMagenta kunye neapos s 5G ukugubungela kungowesibini e-US, nasemva I-Verizon kunye neapos eyakho kwilizwe lonke ukukhutshwa kwebhendi ephantsi . Ngelishwa kubalandeli be-hardcore 'be-Un-carrier & apos, kunzima kakhulu ukukhusela inyani yokuba' uninzi 'lwe-T-Mo & apos; s i-5G median yokukhuphela isantya yayifana namanqaku ayo e-4G LTE.
Ewe kunjalo, ezinye zeemvavanyo eziphantse zibe zizigidi ezi-3 ezenziwe kwisiqingatha sesibini se-2020 zeza nini I-Sprint & apos; ababekade bephakathi kwebhendi ye-5G yayisekwinkqubo yokuphinda isasazwe kwakhona kwaye idityaniswe nenethiwekhi ye-'New T-Mobile ', kodwa zonke izinto ziqwalaselwe, kukho indlela ende ekufuneka ihanjisiwe phambi kwesizwe kunye ne-apos; i-5G yokufumana intshatsheli nayo inokulawula itshathi yesantya.
Kude kube lelo xesha, u-T-Mo wayengenakukwazi ukuwela uphawu lwe-60 Mbps 5G kwizixeko ezihlanu, kubandakanya iFayetteville, North Carolina, apho 5G Isantya sokukhuphela esiphakathi sifikelele kwirekhodi 88 Mbps.
IVerizon ikwenze inkqubela phambili enkulu yokufumaneka kwe5G
Ukongeza ekoyiseni abachasi bayo ekuthembekeni, ukufikeleleka, isantya, idatha, kunye neefowuni zokufowuna kunye nokubopha i-AT & T kwisithsaba sombhalo kwilizwe liphela, iBig Red ibone ukonyuka okukhulu ekufumanekeni kwe5G ngenxa yokupapashwa kwayo kakhulu (kunye nokugculelwa. ) Ukuphehlelelwa kwe-DSS kweyeDwarha . Lilonke, izixeko ezingama-34 zifumene ubuncinci iipesenti ezingama-30 ze-5G ukuphela konyaka, ngokuqinisekileyo ayisisiqalo esibi.
Ngokucacileyo, Inguqulelo & Apos; Okona kulungileyo isantya sokukhuphela i-5G sarekhodwa kwiindawo apho uphawu lwebhanti esezantsi olukhankanyiweyo lwalungafumaneki, njengeHouston, eyayizisa umyinge we-223.1 Mbps ophakathi kwengqondo ... ene-0.3% kuphela yokugubungela. Ngeli xesha, iVerizon ikwazile ukubetha ibhalansi efanelekileyo ye-68.9 Mbps 5G isantya kunye ne-42.8 yepesenti yokufumaneka ngaphandle kokusebenzisa i-mmWave spectrum eWashington, DC.
Kuyamangalisa ngokwaneleyo, iBig Red yavelisa amanqaku angama-72 Mbps aphezulu eNew York ngokukodwa kwi-4G LTE. Iziphumo eziphezulu ze-4G LTE ze-AT & T kunye neT-Mobile, ngendlela, zabhaliswa eCharlotte, North Carolina naseAnn Arbor, eMichigan ngokwahlukeneyo.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, unokuba nomdla wokwazi i-AT & T, T-Mobile, kunye neVerizon kunye neeapos ezilungileyo ze5G amanani afumanekayo athunyelwe eFort Wayne, Indiana, Wichita, Kansas, naseLansing, eMichigan ngokwahlukeneyo.
I-iphone se 2020 ekhusela isikrini
I-AT & T kulindeleke ukuba inikezele nge-iPhone 6s ehlawulelwa nge- $ 300 nje
NgoLwesihlanu omnyama uza kwangoko kubathengi be-iPad mini 4 ngoncedo lweWalmart
UTidal ukhupha iApple Music kunye neSpotify ngezaphulelo zabafundi
I-LG Stylo 4 yexabiso eliphantsi kunanini na eWalmart, kodwa kukho & apos ukubanjwa
I-T-Mobile ikhupha esona sivumelwano silungileyo kwi-iPhone 8 / Plus kunye ne-iPhone X yangaphambi koku-odola ukuza kuthi ga ngoku
I-5 epholileyo ye-RPG kunye nemidlalo ye-adventure enemingxunya kwi-Android nakwi-iOS
UWaze ufihle i-emoticon eyimfihlo; nazi ii-apos; ungayifumana njani ukuba ivele kwifowuni yakho
I-iPhone 6s kunye ne-6s kunye nokuthenga okungu-101: ukuba ungathenga phi, athini amaxabiso, kwaye nini umhla wokukhutshwa